Dagaalka Ruushka ee Ukraine 17 June: Kiev oo Hanjabaad cusub u dirtay Ruushka
HomeWararka CaalamkaDagaalka Ruushka ee Ukraine 17 June: Kiev oo Hanjabaad cusub u dirtay Ruushka
Foto: Bernat Armangue / AP / NTB Foto: NTB
Ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee la xidhiidha dagaalka Ukraine Jimco 17 June.
*Ruushka ayaa mar hore ku guul daraystay dagaalka istiraatijiyadeed ee Ukraine,sida uu sheegay madaxa difaaca ee Britain Tony Radakin. Ruushku waxay gaareen guulo yar yar sida laga soo xigtay Sky News .
Waxaa kaloo la sheegay in Ruushku uu ugu dambayntii ka dhammaan doono askartii iyo gantaalada uu heesto, isla markaana aanay waligood awoodin inay la wareegaan guud ahaan dalka Ukraine.
– Tani waa qalad aad u xun oo uu sameeyay Ruushka. Istaraatiijiyad ahaan, waddanku mar hore ayuu khasaaray. NATO way ka xoog badan tahay – Finland iyo Sweden waxay rabaan inay ku biiraan, ayuu yidhi Radakin.
*Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu u furan yahay in uu Moscow kula kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, balse shuruudo gaar ah ayuu ku xiray.
– Waxaan aaminsanahay in safarka Ruushka uu hadda ku xiranyahay shuruudo, ficillada Madaxweyne Putin. Kaliya halkaas ma tagi karo, Macron ayaa u sheegay baahinta Faransiiska TF1 markii uu ku sugnaa Kyiv Khamiistii. Macron oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in uu Putin kala hadli doono arrimaha bini’aadantinimada, badqabka maxaabiista dagaalka iyo ilaalinta cuntada, si xal loogu helo.
“Ma doonayo in aan wax ka saaro, laakiin mar walba waxan samayn doonaa aniga oo la tashanaya madaxweynaha Ukraine iyo marka ay macno samaynayso,” Macron ayaa yidhi.
* Ukrain ayaa Talaadadii u muuqatay inay ku hanjabtay inay weerari doonto buundada wayn ee uu Ruushku dhisay ee isku xidha Ruushka iyo gacanka Crimea ee la qabsaday. Sirdoonka Ukraine ayaa soo saaray wax ay ku sheegeen inay yihiin waraaqo rasmi ah oo Ruushku leeyahay oo ku saabsan dhismaha buundada, laakiin lama xaqiijin in dukumentiga ka kooban 300 bog uu run yahay.
Waxay dhacday maalin ka dib markii General Dmytro Marchenko uu sheegay in buundada ay noqon doonto “bartilmaameedka koowaad” haddii Ukraine ay hesho hubka lagama maarmaanka ah. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in Ruushka uu buundada u adeegsado daabulka saadka u kala goosha Crimea iyo koonfurta Ukraine.
Buundadan oo dhererkeedu dhan yahay 18 KM waxa ay ku kacday lacag dhan 3.7 Bilyan oo Doollarka Maraykanka ah wakhtigaas, sida uu qoray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, waxaanay tan iyo sannadkii 2018-kii Crimea ku xidhay dhul-weynaha Ruushka oo uu Ruushku qabsaday.